Sababta iyo Sida Loo Sameeyo Akoon Gravatar ah | Martech Zone
Sabtida, Juun 18, 2015 Arbaco, Juun 22, 2015 Douglas Karr
Hal kaamil ah sii kordhinta maamulka iyo hagaajinta darajada mashiinka raadinta ayaa ah helitaanka tixraacyo ku saabsan boggaga ku habboon ee ku saabsan bartaada, sumaddaada, wax soo saarkaaga, adeeggaaga ama dadkaaga. Xirfadlayaasha xiriirka bulshada waxay wada hadlaan maalin kasta. Waxay garwaaqsanayaan in macaamiishooda ay xoogaa fiiro gaar ah uhelaan khadka tooska ah ee aqoonsiga sumadda. Iyada oo isbeddelada algorithm, sidoo kale waa istiraatiijiyad aasaasi ah oo lagu hagaajiyo kanaga qiimeynta keyword on matoorada raadinta.
Waqtiyada qaarkood, ma lihin fursad aan ku wareysano ama wax uga qoro wax soo saarka laakiin garoonku aad buu u wanaagsan yahay waxaan ku martiqaadeynaa xirfadlaha PR inuu macmiilkoodu u qoro boostada martida. Maqaalka sida caadiga ah waa qaybta ugu fudud ee ka qaybqaadashadan, shirkaduhu way ka badan yihiin diyaar inay bixiyaan maqaal. Waxaan u dejinaa shuruudo qaarkood:
Isku day inaad ka dhigto waxyaabaha u dhexeeya 500 iyo 1,000 eray.
Qeex dhibaatada ay leeyihiin suuqleyda iskuna day in ay siiso tirokoobyo kheyraad ah oo taageeraya ujeeddada.
Soo bandhig hababka ugu fiican ee xalinta dhibaatada.
Haddii aad leedahay xalka tiknoolajiyada, bixi faahfaahin ku saabsan sida ay u caawinayso.
Ku dar shaashadda, jaantusyada, jaantusyada ama - gaar ahaan - fiidiyowga xalka.
Uma baahnin waqti kama dambeys ah, laakiin nala socodsii horumarka.
Diiwaangeli qoraaga Gravatar isla markaana na siiya cinwaanka e-maylka qoraaga ee ay iska diiwaan gelin jireen.
Qoraaga waxaa lagu dari doonaa wargeyskeena waxaana laga yaabaa in si toos ah loola xiriiro si loola socdo. Haddii boostada caan ku tahay, xitaa waxaan sameyn karnaa mowduuc ku saabsan mowduuca.
Diiwaangelinta qoraaga Gravatar waa lagama maarmaan sidaa darteed waxay maamuli karaan sawirka lagu soo bandhigay qoraalkooda. La'aanteed, waxaa si joogto ah naloo weydiin lahaa cusbooneysii sawirada qoraaga mana dooneyno inaan taas maamulno. Gravatar waa adeeg fudud oo danta qoraaga ugu wanaagsan in la isticmaalo si ay ugu yeeshaan muuqaal laga garan karo shabakadda oo dhan - maahan oo keliya bartayada.
Waa maxay Gravatar?
Laga soo bilaabo websaydhka Gravatar:
"Afatar" waa sawir kaa wakiil ah khadka tooska ah - sawir yar oo ka muuqda magacaaga agtiisa markii aad la macaamilayso websaydhada. Gravatar waa a Avatar Caalamka Laga Aqoonsaday. Waad soo dejineysaa oo aad abuureysaa astaantaada hal mar oo keliya, ka dibna markaad ka qaybgasho goob kasta oo karti u leh Gravatar, sawirkaaga Gravatar si otomaatig ah ayuu kuu raaci doonaa halkaas. Gravatar waa adeeg bilaash ah oo loogu talagalay milkiilayaasha goobta, horumariyeyaasha, iyo isticmaalayaasha. Waxaa si toos ah loogu daraa koonto kasta oo WordPress.com ah waxaana maamula oo taageera Automattic.
Maxaan U Isticmaalnaa Gravatar?
Dadku badiyaa waxay beddelaan sawirrada muuqaalkooda baraha bulshada. Waxay beddeli karaan qaababka timaha, ama xitaa waxay leeyihiin sawirro cusub oo xirfadeed. Haddii aad u qortay maqaal daabacaad, sidee ayey u cusbooneysiiyaan sawirkaaga kan ugu dambeeyay uguna weyn? Jawaabtu waa Gravatar.
Gudaha WordPress, sawirka qoraaga waxaa lagu heley iyada oo loo marayo xarig sir ah oo emaylka qoraaga ah. Cinwaanka iimeylka qoraaga waligiis si guud looma soo bandhigin. Koontada Gravatar-na waxay kuu oggolaaneysaa inaad maamusho cinwaanno emayl badan oo koontada ku jira, oo wata sawirro badan.
Tags: qoraagaqoraalka qoraagaavatargravatar
Oktoobar 17, 2007 at 10:59 PM
Haddii aad ku aragto Gravatar-ka meel kasta oo shabakadda ah, waa aniga!
Oktoobar 18, 2007 at 4:20 AM
Anigu ma isticmaalayo Gravatar laakiin taa badalkeeda waxaan isticmaalaa MyAvatar oo ah qalab loogu talagalay WordPress.
Tani waxay u oggolaaneysaa isla wax inay dhacaan laakiin waa uun in avatarka la muujiyay uu la mid noqon doono midka ku jira MyBlogLog.
Tani waxay fududeyneysaa waxyaabo badan maxaa yeelay inta badan aqristayaasha ma qaadi doonaan tallaabada dheeriga ah si ay u soo geliyaan avatar kaliya wax loogu qoro. 🙂
Oktoobar 18, 2007 at 11:35 AM
Waan jeclahay gravatars waana ku faraxsanahay inay soo diyaariyeen. Waxaan rajeyneynaa, inay si muuqata u dhexgeli doonto wordpress qeybta soo socota…
Waxaa jira dib u eegis wanaagsan oo ku saabsan gravatars at http://www.thetechbrief.com/2007/10/12/get-yourself-a-gravatar-while-theyre-still-hot/
Oktoobar 19, 2007 at 12:12 AM
Haddana waa adeeg gebi ahaanba bilaash ah - ku dar inta badan avataar iyo email id ee aad rabto 🙂
Jan 8, 2008 saacadu markay ahayd 10:59 PM
Runtii waxaan abuuray fasal Gravatar ah hadaad gujiso xiriiriyaha magacayga. Loosely wuu isku lammaan yahay wuxuuna u shaqeeyaa sidii riyo - sidoo kale wuxuu leeyahay kayd ah oo leh taariikh dhicitaankiisa avatar - si loo badbaadiyo waqtiyada rarka. Kaliya waxay ku shubi kartaa avatar gudaha.
Aadam @ TalkPHP.com